KDE Unganidzo Zvino Inowanikwa muBeta Fomu yeWindows | Linux Vakapindwa muropa
KDE Unganidzo ikozvino yawanikwa mune beta fomu yeWindows, uye inogona kutorwa pasi kubva kuchitoro chako
Ndinoyeuka makore mazhinji apfuura, apo mukuru weSamsung akabatwa tweeting kubva kune iPhone, uyo akazviregerera achiti aizviitira iyo ecosystem, uye kuti Samsung mafoni aive ari nani. Wese munhu anogona kuve nemafungiro, asi ini ndinofunga kuti haina kurasika: nzira iyo madivayiri eApple anotaurirana nayo anoita kuti zvinhu zvive nyore, uye chinhu chepedyo chiripo muLinux kushandisa Google masevhisi pane desktop uye nhare mbozha , zvakare, shandisa KDE Connect.
KDE Unganidzo chishandiso chinobatanidza iyo Android foni nekombuta yeLinux kuti iite zvimwe zviito, sekugamuchira zviziviso kana kutumira mameseji Yakave iriko kwenguva yakareba paLinux, kwemakore akati wandei inoshanda pa macOS uye nhasi vazivisa yavo kusvika kuMicrosoft Store, iyo Windows 10 chitoro cheapp.
KDE Unganidzo inobatanidza yako Android foni nePC yako
Iye zvino KDE Unganidzo inogona kubatanidza yako Windows muchina zvakare! Iyo Windows vhezheni yeKDE Unganidzo inotsigirwa zviri pamutemo, uye iwe unogona kuwana iyo beta vhezheni izvozvi kubva kuMicrosoft Store. Yakasarudzika yekubatanidza-chete kuwana: https://microsoft.com/store/apps/9N93MRMSXBF0
Nguva pfupi yapfuura iyo macOS vhezheni, KDE Nharaunda yakaburitsa preview vhezheni yavo KDE Unganidzo yeWindows, asi zvakange zvisiri kusvika nhasi Kurume 29, 2021 kuti vazivise rutsigiro rwavo rwepamutemo. Kunyangwe ichisanganisira iyo «Beta» chitaridzi, Inogona zvakare kushandiswa muMicrosoft system nerunyararo rwepfungwa runouya nekuziva kuti vanotsigira software.
Pamwe, kana zvakatora nguva yakareba kuisa iyi vhezheni kuchitoro chepamutemo, imhaka yekuti Windows 10 yatove nechisimba chishandiso inoita zvimwe zvezvinhu zvinoitwa neKDE. Chero chingave chikonzero, ikozvino hazvina basa kuti ndeipi inoshandisa system komputa yedesktop, chero bedzi isu tichishanda pane imwe yeWindows, macOS kana Linux. Tinogona kubatanidza yedu Android foni, ne Anwendung ichi kubva Google Play, uye tora mukana weizvo KDE Unganidzo inotipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE Unganidzo ikozvino yawanikwa mune beta fomu yeWindows, uye inogona kutorwa pasi kubva kuchitoro chako
Ndinovimba inouya kuApple seWarpinator
Une icho pamusoro peiyo yakataurwa tweet: KDE Unganidzo ndiyo software yePC, asiwo izvo zvinobatanidza mafoni eApple kuburikidza neapp ine zita rimwe chete https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kde.kdeconnect_tp
Zvisinei, ini ndinowedzera chinongedzo kuchinyorwa.
Deepin Linux 20.2.2 inosvitsa nyowani software chitoro inotsigira Android maapplication ... kana saka ivo vanoti